१० हजार भेन्टिलेटर ‘स्ट्यान्डबाई’ राख्न सुझाव « Khabarhub
काठमाडौं – नेपालमा आगामी तीन महिनासम्म कोरोना भाइरस संक्रमणको दर अझै बढ्ने र संक्रमित गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्ने भएकाले कम्तीमा १० हजार भेन्टिलेटर स्ट्यान्डबाई राख्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा चिकित्सकले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अहिले देशभरमा १ हजार ५ सय ९५ आइसीयू बेड र ८ सय ४० वटा भेन्टिलेटर मात्रै छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर एक्कासि बढ्दै जान थालेकाले यसले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका हुन् ।
आचार्यले सीमा क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी अस्पताल बनाउनुपर्ने बताए । अनुसन्धाताका अनुसार नेपालमा कम्तिमा सयवटा पीसीआर मेसिनबाट टेस्ट विस्तार गर्नुपर्छ । भारतीय सीमा क्षेत्र जोडिएका जिल्लामा कम्तिमा ५० हजार पीसीआर टेस्ट र १ लाख आरडीटी टेस्ट गर्नुपर्छ ।
डा. आचार्यले अब ७७ वटै जिल्लालाई हाई रिस्क जोनमा राखी सबै किसिमका सुरक्षा विधि अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । आचार्यले विगत तीन साताको समयमा भारतबाट १ लाख १९ हजार नेपाली स्वदेश फिर्ता भइसकेको र उनीहरुलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्न नसकिएकाले समस्याले विकराल रूप लिइरहेको बताए ।
‘उनीहरूलाई नेपाल आइसकेपछि दोस्रो दिनदेखि नै पीसीआर टेस्ट गर्ने तथा २८ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ,’ डा. आचार्यले भने, ‘क्वारेन्टिनमा राखे पनि प्रत्येक हप्ता टेस्ट गर्नुपर्छ ।’
डा. आचार्यले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षमता र बाहिरबाट आएका मानिसको अवस्था हेरेर स्थानीय तहमा २५ बेडको आईसीयू सुविधासहितको अस्पताल निर्माण गर्न जरुरी रहेको जनाए ।
उनले देशैभरका सबै सरकारी अस्पतालमा कम्तिमा १ सय बेड थप गर्ने र सबै जिल्लामा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७७, सोमबार १२ : ४७ बजे